သတိ!!!! ချော်လဲတတ်သည် » Today Bago
HomeLifestyleFunnyသတိ!!!! ချော်လဲတတ်သည် သတိ!!!! ချော်လဲတတ်သည် April 4, 20160comments OMCTC Posted in Funny0ပင်လယ်ကမ်းစပ် ရွာတစ်ရွာက အိမ်ရှင်ယောက်ျားတွေဟာ မကြာခဏ ပင်လယ်ထဲသွားပြီး ငါးသွားရှာကြတယ်။ အိမ်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန် မိန်းမတွေက ဖောက်ပြန်ကြတယ်။ ဖောက်ပြန်ပြီးတိုင်းလည်း ဖာသာဆီသွားပြီး အမှားဝန်ခံကြတယ်။ ကြာလာတော့ ဖာသာကမိန်းမတွေကို “နောက်တစ်ခါ လာဝန်ခံကြရင် ခိုးစားတယ်လို့မပြောဘဲ “ချော်လဲတယ်”လို့ ပြောပါ။ ချော်လဲလာတယ်လို့ ပြောရင် ငါသိပြီ” လို့ မှာလိုက်တယ်။
နောက်တော့ ဖာသာအသက်ကြီးပြီး နောက်ဖာသာအသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းတယ်။ မပြောင်းခင် ရွာသူကြီးကို “ချော်လဲတယ်”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောပြပြီး နောက်ဖာသာကိုရှင်းပြဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဖာသာအသစ်ရောက်လာတော့ သူကြီးက အဲဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောပြဖို့မေ့သွားခဲ့တယ်။
“သူကြီး… ခင်ဗျား ဘာရယ်နေတာလဲ! ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ခင်ဗျားမိန်းမ ချော်လဲတာ ၃ ခါရှိပြီဗျ”
Ref: Royal Hero Medi
ပငျလယျကမျးစပျ ရှာတဈရှာက အိမျရှငျယောကျြားတှဟော မကွာခဏ ပငျလယျထဲသှားပွီး ငါးသှားရှာကွတယျ။ အိမျရှငျယောကျြားမရှိတဲ့အခြိနျ မိနျးမတှကေ ဖောကျပွနျကွတယျ။ ဖောကျပွနျပွီးတိုငျးလညျး ဖာသာဆီသှားပွီး အမှားဝနျခံကွတယျ။ ကွာလာတော့ ဖာသာကမိနျးမတှကေို “နောကျတဈခါ လာဝနျခံကွရငျ ခိုးစားတယျလို့မပွောဘဲ “ခြျောလဲတယျ”လို့ ပွောပါ။ ခြျောလဲလာတယျလို့ ပွောရငျ ငါသိပွီ” လို့ မှာလိုကျတယျ။
နောကျတော့ ဖာသာအသကျကွီးပွီး နောကျဖာသာအသဈတဈယောကျပွောငျးတယျ။ မပွောငျးခငျ ရှာသူကွီးကို “ခြျောလဲတယျ”ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကိုပွောပွပွီး နောကျဖာသာကိုရှငျးပွဖို့ မှာခဲ့တယျ။ ဖာသာအသဈရောကျလာတော့ သူကွီးက အဲဒီစကားရဲ့အဓိပ်ပါယျကို ပွောပွဖို့မသှေ့ားခဲ့တယျ။
ရှာထဲ မိနျးမတှကေ အရငျအတိုငျးပဲ ခိုးစားပွီးတိုငျး ဖာသာအသဈဆီသှားပွီး ဝနျခံကွတယျ။ ခြျောလဲတဲ့လူတှေ မြားနတောကွောငျ့ ဖာသာက သူကွီးဆီသှားပွီး မိနျးမတှေ မကွာခဏခြျောလဲနတောကွောငျ့ ရှာထဲကလမျးတှေ ပွုပွငျသငျ့ကွောငျး ပွောပွတယျ။ ဖာသာစကားကိုကွားတော့ သူကွီးက ထရယျတယျ။ အားရပါးရ ရယျနတေဲ့သူကွီးကိုကွညျ့ပွီး ဖာသာနားမလညျစှာနဲ့ ထအျောတယျ။
“သူကွီး… ခငျဗြား ဘာရယျနတောလဲ! ဒီတဈပတျအတှငျး ခငျဗြားမိနျးမ ခြျောလဲတာ ၃ ခါရှိပွီဗြ”
ဇီးကွက်လေးနဲ့ရယ်နေရတယ်	April 4, 2016	0 comments နံရံပေါ်မှာ လက်မ ၁၂၀ အထိ HD ပုံရိပ်ထိုးပြီး၊ ဂိမ်းက...	April 4, 2016	0 comments Share this 0SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr